Amazon Inozivisa Rutsva Rutsva rweEcho Zvishandiso | Gadget nhau
Amazon Inozivisa Rutsva Rutsva rweEcho Zvishandiso
Ignacio Sala | | Vatauri, Amazon
Amazon ndiyo yaive kambani yekutanga kubheja pane vakangwara masipika makore apfuura Yakanga iri muna 2014 payakatanga rwendo rwayo mumusika uyu nerubatsiro rweamazon chaAdvis mubatsiri: Alexa. Kubva ipapo haana kuzorara chero nguva, izvo zvakamutendera gara sereferensi mumusika.
Iyo Amazon Echo yakafanana neSpotify mukumhanyisa mimhanzi. Kune vanhu vazhinji, hapana vakurukuri vakangwara pamusika, pane iyo Amazon Echo. Vakomana vanobva kuna Jeff Bezos, vakapa nezuro kuvandudzwa kweEcho renji ye2019, kuvandudzwa kwatinowana iyo nyowani Echo, Echo Flex, Echo Dot newachi uye Echo Studio.
Amazon yakatsanangura makore apfuura kuti apinde imba yega yega pasi uye pamutengo wainotora kana isina kudaro, haina zvishoma. Nemhando nyowani yezvigadzirwa zveEcho, Amazon inotiunzira zvigadzirwa zvitsva uye nekuvandudza kwakanyanya kune iyo Alexa inoshanda. Pano tinokuratidza dzese nhau dze2019 iyo Amazon yakapa uye yatowanikwa muSpain.
1 Nyowani Echo
3 Echo Dot ine wachi
5 Nyowani Alexa Zvimiro
6 Mhuri yeEcho inosvika kune mamwe majaira
6.3 Echo Chimiro
Iyo itsva Echo chizvarwa chechitatu Amazon Echo, chizvarwa chechitatu chinobatanidza vatauri vepamusoro-soro vane tekinoroji yeDolby uye iyo inobereka ruzha muna 360º. Tinogona kuibatanidza kune yechipiri chizvarwa modhi kuti tiwane stereo kurira, kuita kuti maikorofoni ibhatane yakatarwa uye inowanikwa mumavara mana: anthracite, indigo, grey grey uye grey grey.
El Amazon Echo 3rd Gen ane mutengo we 99 euros uye uchasvika pamusika muna Gumiguru 16.
Kutanga pa29 euros, iyo Echo Flex inova chisingadhuri chishandiso icho internet yekutenga hofori inoita kuti iwanikwe kwatiri. Ichi chishandiso plugs akananga muhomwe, saka inokodzera kumakona iwayo uko kuve netambo dzakasununguka idambudziko, senge imba yepasi, garaji, makamuri madiki ...
Nekuda kwehukuru hwayo hudiki, tinogona kuiisa mune chero kona yemba yedu kuti tigone nguva dzose, tichishandisa mirairo yezwi, kubata zvishandiso zvakabatana mumba medu, kuziva nhau dzichangoburwa ... asi zvakare ine chiteshi che USB kukwanisa kubhadharisa smartphone kana chero chimwe chigadzirwa.
El Echo Flex neAmazon zvichazova inowanikwa kubva munaNovember 14, asi isu tinogona kutochengetedza.
Echo Dot ine wachi
Chizvarwa chechipiri Echo Dot chinouya ne yakavakwa-wachi. Iyi modhi ndeimwe yevanotengesa zvakanyanya uye ikozvino inosanganisa yakanaka LED skrini yekuisa patafura yemubhedha kana mukicheni umo nguva inoratidzwa. Iyo yekupenya nhanho inochinjika pakarepo kune iyo ambient mwenje, saka isu hatifanire kunetsekana nezve kusimba kwechiedza kana isu tichironga kuishandisa mune yedu yekurara.
Mamwe mabasa ese atinopihwa nechizvarwa chechipiri ichi zvakafanana sepakutanga, saka tinogona kukumbira tembiricha yazvino, nhau dzichangoburwa, kutanga mugadziri wekofi, kudzima alarm ... Echo Dot newachi inowanikwa kwema69,99 euros uye ichasvika pamusika musi waGumiguru 16, kunyangwe isu tingave takachengeta iyo.
Iyo Echo Studio ndiyo rMhinduro yeAmazon kune ese Apple HomePod pamwe nemhando dzakasiyana idzo Sonos dzinoita kuti dziwanikwe kwatiri. Iyo Echo Studio inoumbwa ne 5 yedirector vatauri yakagadzirirwa kugadzira yakapfuma, yakajeka uye nuanced kurira. Pazasi, isu tinowana ine simba bass chiteshi iyo nekutenda kune yayo 133mm woofer inopa yakanyanya simba ye330 W.
Inobatanidza a 24-bit DAC uye 100 kHz gudzazwi bhendi rekurasikirwa kwepamusoro kutendeka mimhanzi yekutamba. Kufanana neApple's HomePod, iyo Echo Studio inozviona yega acoustics yenzvimbo irimo uye inogadzirisa kurira kwekuteerera kuti uburitse ruzha rwakanakisa nguva dzese.
Echo Studio ndiyo mutauri wekutanga akangwara Inonunura inonyudza matatu-matatu mativi eruzhinji ruzivo nekuda kweSony's Dolby Atmos uye 360 ​​Reality Audio tekinoroji.
Mutengo we Echo studio Iyo 199 euros uye icharova pamusika munaNovember 7, kunyangwe sevamwe mamodheru, isu tinogona kutochengetedza.
Nyowani Alexa Zvimiro
Mubatsiri weAmazon Echo, Alexa, atambirawo mabasa matsva anozoita uyu mubatsiri, mumwe wemhuri.
Ziva zevezeve. Kubva ikozvino zvichienda mberi, kana tikabvunza Alexa nezwi rakaderera, iye achatipindura nezwi rimwe chete reizwi, kuti tirege kumutsa mhuri yedu.
Tsanangura mhinduro. Chokwadi pane kanopfuura kamwe chiitiko, Alexa yakaita chiito kana kupindura nenzira yatisingatarisiri. Kutenda nekuvandudzwa kwakaunzwa neAmazon, isu tichakwanisa kubvunza Alexa kuti sei apindura seizvi, zvaakanzwisisa kana kuti nei achitora chimwe chiitiko. Iyi ficha ichavandudza mashandiro emubatsiri wega uye ichave iriko kupera kwegore.
Delete zvakarekodhwa kwezwi. Muzhizha rino gakava rakamuka nezve mashandiro evose VABatsiri vezwi, nekuti makambani ese anochengetedza zvidimbu zvekutaurirana kuti azviongorore kana mubatsiri asina kuzvinzwisisa. Nenzira iyi, vanopinda vanowedzera nzira nzira ruzivo rwavo kuti vakurumidze kunzwisisa kutaurirana nevapinduri vavo. Kutanga pakupera kwegore, isu tichakwanisa kubvunza Alexa kuti ibvise otomatiki kurekodha kwemazwi kurekodha uye zvinyorwa zvinopfuura mwedzi mitatu kana gumi neshanu zvichingoenderera.
Mhuri yeEcho inosvika kune mamwe majaira
Panguva yechiitiko ichi, Apple haina kungoisa zvishandiso zvitsva zvandakambotaura pamusoro, izvo chete ndizvo zviripo kuSpain, asi zvakare yakatora nhanho yekuenderera uye Inowedzera huwandu hwesimba reAki-inochengetedzwa michina ine isina waya mahedhifoni, mhete, router, uye magirazi. Aya majaira parizvino haana zuva rekuburitsa rakarongwa kunze kweUnited States.
Iyo Echo Buds kubheja kweAmazon pasirese revabatsiri-vanogoneswa vasina mahedhifoni. Nekuzvimiririra kwemaawa mashanu uye kesi yekuchaja iyo inopa makumi maviri emaawa ekuzvimiririra, vanova sarudzo yakanaka yekutarisa uye izvo Vanokwikwidza zvakananga neApple's AirPods uye Samsung's Buds.
Uyezve, ivo vari inowirirana naSiri uye Google Mubatsiri nekubaya imwe yemahedhifoni nepo Alexa ichibvumidzwa nemirairo yezwi. Vane ruzha kudzima system yakagadzirirwa naBose uye inotengwa pamadhora 129.
Nekuda kwerin'i iyi, iyo yakabatana ne smartphone, tinogona kupa rairo kuna Alexa tisingafanirwe kushandisa iyo smartphone, ndizvo Yakagadzirwa ne titanium uye zvakare inosanganisira diki mutauri yaunogona kupindura nayo zvikumbiro zvedu kana kutumira isu zviziviso. Mutengo wemagirazi aya i $ 99,99 uye unongowanikwa chete kuburikidza nekukoka
Google Girazi raive zano rakanaka iro raive risina magumo anofadza, kunyanya nekuda kweyakavakirwa-mukati kamera. Iyo Echo Framde kubva kuAmazon magirazi ayo vanobatanidza maikorofoni izvo zvinotibvumidza isu kuraira mubatsiri weAmazon. Uye zvakare, nekutenda kuvhura tekinoroji tekinoroji tinogona kuteerera kune kuziviswa kana mimhanzi yedu yatinofarira pasina mumwe munhu anozviona.
Mutengo wemagirazi aya i $ 179,99 uye inogona kuwanikwa chete kuburikidza nekukoka kungofanana neEcho Loop.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » Amazon » Amazon Inozivisa Rutsva Rutsva rweEcho Zvishandiso
Sonos Move, mutauri mutsva weSonos anoenda kunze kwenyika
Sonos bhatiri mutauri ikozvino yave kutengeswa: Sonos Famba